Luk-Ọrụ Ndị Isi - IntegritySyndicate.com
Mbido Ntọala Akwụkwọ Nsọ Luk-Ọrụ Ndị Isi
Okwu Mmalite nke Luk-Ọrụ Ndị Isi
Okwu mmalite nke Luk na Ọrụ Ndịozi
Ndabere maka Luk-Ọrụ Ndị Isi
Okwu ndị dị na John
Okwu ndị Mark
Luk-Ọrụ bụ akwụkwọ mpịakọta abụọ nke otu onye dere ya na narị afọ mbụ mgbe Mak na Matiu gachara nakwa n’ihi ha abụọ. Ọ nwere 27% nke Agba Ọhụrụ ma bụrụ ntọala kacha mma maka ịghọta Iso Ụzọ Kraịst narị afọ mbụ ebe ọ na-enye akaebe kacha atụkwasị obi nke Kraịst na Ndịozi ya. Ọ bụ naanị ntụaka agba ọhụrụ nke guzoro naanị ya dị ka inye aka n'ihu n'etiti ije-ozị nke Kraịst na ozi nke ndịozi ya maka inweta nghọta sara mbara nke ọma maka isi mmalite nke ozi Oziọma na ozizi Ndị Kraịst. Ya mere, Luk-Ọrụ bụ ntụaka kacha mma maka ịghọta nkwenye na omume nke Nzukọ-nsọ ​​mbụ.
Onye dere Luk-Ọrụ bụ onye Kraịst mbụ na-akọ akụkọ ihe mere eme na ọkà mmụta nkatọ bụ onye gosipụtara ọkwa dị elu nke iguzosi ike n'ezi ihe na ikike n'ọrụ ya dị mpịakọta abụọ. Onye edemede ahụ, ebe o sochiri ihe nile ruo oge ụfọdụ gara aga, gbalịsie ike ime ka ihe ndekọ ahụ guzozie ka ndị kwere ekwe wee nwee na n'usoro n'usoro usoro oge maka nzube nke inwe obi ike n'ihe banyere ihe ndị na-eso ụzọ Jizọs na ndịozi ya kụziri. Enwere ike igosi Luk-Ọrụ Ndịozi inwe ọkwa kachasị elu nke ntụkwasị obi na izi ezi nke akụkọ ihe mere eme ma e jiri ya tụnyere Oziọma ndị ọzọ (Lee Ntụkwasị obi nke Luk-Ọrụ). Dabere na nke a na ihe ndị ọzọ, Luk-Ọrụ kwesịrị ịbụ ntụaka bụ isi anyị gbasara isi ihe dị mkpa nke ozi Oziọma (Lee. Ntụle maka Luk-Ọrụ Ndị Isi).
Luk kwetara na ọtụtụ ndị agbalịrịlarị ịchịkọta akụkọ, o chekwara na ọ dị mkpa ime otú ahụ ka ndị kwere ekwe wee mara nke bụ́ eziokwu banyere ihe ndị a kụziiri ha ( Luk 1:4 ) Ọmụmụ Baịbụl egosila na e dechara Luk n’ikpeazụ. ma nwee ohere na Mak na Matiu mgbe ọ na-ede akụkọ ya (lee Usoro nke Oziọma).
Onye dere ya bụ naanị onye dere Agba Ọhụrụ nke dekwara akwụkwọ nke Ọrụ Ndịozi: akụkọ akụkọ gbasara mgbasa nke ụka mbụ na ihe Ndịozi kwusara. Onye dere akwụkwọ ahụ kwuru na ya na ndịozi ya mere njem (Ọlụ Ndịozi 16:11–15). Nzọrọ siri ike ma ọ bụrụ na a ga-agbagha ya n'oge ọ bụghị eziokwu. Ojiji asusu na Luk na-aga n'ihu na-egosi na odee nwere nzụlite nka na ahụike. Luk kwuru na ya enyochala ihe niile site na mmalite. Na ọkwa nkọwa nke ọ na-enye ihe akaebe nwere ozi akụkọ ihe mere eme akọwapụtara karịa Mathew na Mark. Luk bụ naanị ozi-ọma Synoptic nke ahaziri dị ka akụkọ ihe mere eme nke ihe niile dị n'usoro n'usoro oge. Luk-Ọrụ bụkwa nke kachasị nkọwa n'ime atọ ahụ gbasara ntụaka akụkọ ihe mere eme na a pụrụ ịgbachitere ntụkwasị obi ya nke ukwuu (Lee. Ịza Luk-Ajụjụ nke Ọrụ Ndịozi).
Ọ bụ ezie na Oziọma Luk malitere n’amaokwu ise n’ezie, ọ bụ amaokwu anọ ndị mbụ na-enye anyị ihe àmà na-egosi na ọ bụ eziokwu. Ebe e dere ọtụtụ n’ime Testament Ọhụrụ n’asụsụ Grik nkịtị nke Koine, Luke 1: 1-4 e dere ya n’asụsụ Grik kacha mara mma, nke oge gboo a chọtara n’ebe ọ bụla n’ụwa ochie. Ụdị agụmagụ na-egosi nanị ndị odee Gris nwere ọkaibe. Onye ọkà ihe ọmụma, onye nkụzi ma ọ bụ onye ọkọ akụkọ ihe mere eme n'oge ochie ga-edepụta okwu mmalite dị otú ahụ mgbe ọ chọrọ ka a na-asọpụrụ ọrụ ahụ. Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Gris na Rom a ma ama mere nke a. N’amaokwu anọ mbụ nke Oziọma ya, Luk na-enye ihe mkpali pụtara ìhè nke ịnọgide na-enwe ọ̀tụ̀tụ̀ kasị elu nke izi ezi. Ọ na-ekwe nkwa na Oziọma ahụ bụ akwụkwọ edemede na akụkọ ihe mere eme dị mkpa. Ọ na-atụ aro na Oziọma ya kwesịrị inye ọkwa dị elu nke izi ezi na ntụkwasị obi karịa ndị ọzọ. Ebumnuche bụ itinye aka na onye na-agụ ya abụghị akụkọ ifo, akụkọ ifo ma ọ bụ akụkọ ifo. Rater ọ bụ inye akụkọ n'usoro nke ezigbo ndị mmadụ, ihe omume na ebe dị adị. Ọ chọrọ ka onye na-agụ ya mara na ya chịkọtara Oziọma ya n'ụkpụrụ nke iguzosi ike n'ezi ihe kachasị elu site n'iwepụta akụkọ akụkọ ihe mere eme bụ eziokwu nke gosipụtara n'ọtụtụ ebe ntụaka nke nwere ike iguzogide nyocha nke ndị ọzọ na-enweghị ike.
Oziọma Luk ka e degaara “Tiofilọs kasị mma” (Luke 1: 3). A pụrụ ịsụgharị aha ahụ Theophilus ịbụ “onye hụrụ Chineke n’anya.” Atụpụtala ọtụtụ echiche gbasara onye a na-ekwu okwu. Ọtụtụ ndị ọkà mmụta nwere echiche na a na-agwa ndị mmadụ ozi ọma, ma ọ dịghị onye maara nke ọma. Omenala nsọpụrụ (agụmakwụkwọ) na-ekwusi ike na Theophilus abụghị mmadụ. Okwu ahụ n’asụsụ Grik pụtara “Enyi Chineke,” n’ihi ya, e gwara ma Luk ma Ọrụ Ndịozi nye onye ọ bụla kwekọrọ ná nkọwa ahụ. N'ọdịnala nke a, ndị odee lekwasịrị anya ka ndị na-ege ntị lekwasịrị anya, dị ka ọ dị n'Oziọma ndị ọzọ nke akwụkwọ nsọ, bụ ndị kwere ekwe n'oge ahụ ma a na-akpọghị aha ha. N'echiche n'ozuzu, ọ ga-emetụta onye nwere iguzosi ike n'ezi ihe dị elu inwe mmekọrịta n'ebe Chineke nọ. Atụwo aro na Theophilus bụ nanị okwu ọnụ maka Ndị Kraịst nile dị ka aha na-adọrọ adọrọ nke onye dere akwụkwọ ga-agwa onye na-agụ ya. Nke a bụ ụdị onye na-agụ nke ga-etinye uche na nkọwa ziri ezi nke eziokwu ahụ, dịka inwe obi ike (ọkwa kachasị elu) n'ihe ndị a kuziri.
(Gụọ Luk 1: 1-4.)
Dị ka ọtụtụ emeela ka ha nwee akụkọ nke ihe emezuru n'etiti anyị, dịka ndị ahụ site na mmalite bụ ndị ji anya ha hụ ihe na ndị ozi nke okwu ahụ nyefere ha n'aka anyị, ọ dịkwa m mma, ebe m gbasoro ihe niile anya. oge gara aga, ide akaụntụ dị n'usoro maka gị, Tiofilọs mara mma, ka unu wee jide n'aka n'ihe ndị unu mejọrọt.
Ọrụ 1: 1-2
N'akwụkwọ nke mbụ, O Theophilus, M na -emekọ ihe niile Jizọs malitere ime na nkuzi, ruo ụbọchị e buliri ya, mgbe o nyesịrị ndị mmụọ ozi iwu site na mmụọ nsọ.
Ibe ndị sochirinụ na-enye ihe ndabere maka isi okwu Luk n'Ọrụ Ndịozi. Nke mbụ kpuchiri usoro e dere Oziọma ndị ahụ na-egosi na e dechara Luk mgbe Mak na Matiu gachara, onye dere ya dekwara Matiu dị ka ihe ntụaka ma dezie Matiu na Mak n’ọtụtụ ụzọ. Edemezigharị Luk dere gbasara Matiu na Mak n'ụzọ zuru ezu na ngalaba ndị ọzọ. Ntụkwasị obi nke dị na peeji Luk-Ọrụ na-enye nkọwa ọzọ nke isiokwu, vidiyo na ntụaka akwụkwọ ndị ọkà mmụta na-akwado ntụkwasị obi nke Luk-Ọrụ. Ibe Ịza Luk-Ajụjụ nke Ọrụ Ndịozi na-eleba anya n'agụmakwụkwọ dị oke egwu nke ezubere na Luk na Ọrụ Ndịozi ma na-enye azịza maka mmegide ụfọdụ n'amaokwu ụfọdụ. Na mgbakwunye. E nyere otu isiokwu kwuru ihe ndị ọzọ e kwuru banyere Luk-Ọrụ Ndịozi.
Usoro nke Oziọma
Ntụkwasị obi nke Luk-Ọrụ
Ịza Luk-Ajụjụ nke Ọrụ Ndịozi
Ntụle maka Luk-Ọrụ Ndị Isi
Jọn, yana akwụkwọ ozi Johannine, so na oge ndịozi gachara (90-150 AD) ma bụrụkwa ihe sitere na mmalite narị afọ nke abụọ. Enweghị ike iweta Jọn dị ka ihe ziri ezi n'akụkọ ihe mere eme dịka ọ na-egosipụta enweghị nkwekọ doro anya na ozi ọma nke Synoptic, ọ na-emegide ya na odee na nhazi ya. Ọ bụghị ruo mgbe afọ 2-140 AD ka a malitere izo aka n'ihe odide sitere n'ozi ọma n'ihu n'ihe odide nke Ndị Kraịst oge mbụ na-akwado nkwado. Edere okwu ndị na-esite na ọdịiche dị n'etiti Oziọma nke anọ na Synoptics. Ọkà mmụta dị egwu nke nwere nrụtụ aka, nrụtụ aka, na nkọwapụta ka enyekwara gbasara nkatọ nke Jọn
Oziọma nke anọ vs Synoptics
Nkatọ nke Jọn
Matthew nwere ọtụtụ okwu na-eme ka a na-enyo enyo ntụkwasị obi ya. Nke mbụ, e nyere ndetu mmeghe banyere Matiu bụ́ ndị metụtara ihe e si nweta, odee, na nhazi ya. Ozizi Farrer na-enyekwu ezi uche maka ijide Matiu na inwekwu obi abụọ na-atụle o yikarịrị ka Luk wepụrụ ọtụtụ ọdịnaya na Matiu. Ha bụ isi ihe na-emegiderịta onwe ha nke Matiu na ihe ndekọ Oziọma ndị ọzọ dị ka ihe ka ọtụtụ nkwugide dị na Agba Ọhụrụ bụ Matiu megidere Mak, Luk, na Jọn. Akọwara okwu ndị ọzọ metụtara Matiu n'ihe gbasara akụkụ akwụkwọ nwere nsogbu na asụsụ na-ekwekọghị ekwekọ. Ndozi nke Luk banyere Matiu dekọbara ihe atụ ndị Luk mere ọtụtụ mgbazi na nkọwa banyere Matiu. Edekọkwara ihe ịchọ mma Matiu kwekọrọ na nzọrọ akụkọ ihe mere eme, nzọrọ amụma, na amaokwu ndị ọzọ nwere mkpa ozizi nke na-edoghị ebe ọ bụla ọzọ n'ime Testament Ọhụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, e nyere ihe àmà megidere okwu ọdịnala nke Matiu 28:19 banyere usoro baptizim nke atọ n’ime otu, bụ́ nke na-egosi na ọ pụrụ ịbụ na e mechaa tinyekwuo ya. Ọzụzụ mmụta dị egwu gụnyere nrụtụ aka, nrụtụ aka, na ihe nkọwa gbasara nkatọ nke Matiu
Okwu Mmalite & Farrer Theory
Ihe ịchọ mma nke Matiu
Mmezi nke Luk n’elu Matiu
Nkatọ nke Matiu
Mmegide nke Matthew
Luk webatara ihe ka ukwuu n'ime Mak ma mee mgbazi na nkọwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Mak egosighị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ okwu dị ka Jọn na Matiu. Mak abụghị akụkọ ihe mere eme n'usoro oge e bu n'obi ka ọ bụrụ akụkọ ihe mere eme otú Luk si dị. N'oge a na-edegharị na mgbasa ozi, agbakwunyere ọtụtụ ụdị dị iche iche na Mak mee ka ọ kwekọọ na Matiu. E depụtaghachiri Mak ugboro ugboro karịa Matiu na Luk na narị afọ abụọ mbụ, e nwekwara ihe odide Grik ole na ole bụ́ ndị na-agba akaebe na ihe odide mbụ ahụ bụ. Ụdị nke Mark nwekwara njedebe dị iche iche. Ndị ọkà mmụta na-eji ihe odide Latịn mbụ nke Mak nweta nkọwa ka mma banyere ọgụgụ mbụ nke Mak. Ndozi Luk banyere Mak depụtara ihe atụ ndị Luk mere ọtụtụ mgbazi na nkọwa gbasara Mak. Ọkà mmụta dị egwu nwere nrụtụ aka, nrụtụ aka, na agụmagụ akwụkwọ gbasara nkatọ nke Mark
Mmezi nke Luk n’elu Mak
Nkatọ nke Mark